नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले प्रम ओली र प्रचण्डलाई भेटेर के के भने त ? « Kalakhabar
नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले प्रम ओली र प्रचण्डलाई भेटेर के के भने त ?
प्रकाशित मिति : सोमबार, १ भाद्र २०७७ १४:३७
कलाखबर संवाददाता,१ भदौं –काठमाण्डौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा प्रधान मन्त्रि ओली र प्रचण्डलाई भेटेर निस्किएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबिच संवैधानिक नियुक्तिबारे परामर्श भएको छ । ओली र देउवाबिच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो । त्यस क्रममा देउवाले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदीमा गएको परिहोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले पहिरोको जोखिममा परेको भन्दै बारम्बार गुहार लगाउँदा पनि सरकारले नसुनेका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको भन्दै देउवाले दुःख व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले यति गम्भीर गल्तीको जवाफदेहिता लिनुपर्छ कि पर्दैन रु’ भनि देउवाले प्रश्न गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । बाढी तथा पहिरोबाट देशका विभिन्न क्षेत्रमा जनधनको क्षति भइरहेको र त्यसमा सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको तर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा मृत्यु हुनेको संख्या बढी रहेका बेला सरकार बढ्दो चुनौतीको सामना गर्नसक्ने ढंगले कार्य गर्न सरकार समर्थ नदेखिएको देउवाले बताए । उनले ‘कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन सरकार किन गम्भीर छैन रु आइसोलेशन र भेन्टिलेटर पर्याप्त व्यवस्था गर्न किन ढिलाइ रु’ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन् । यसैगरी त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसंगति उपर कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको पनि देउवाले बताएका छन् ।
निश्चित विधि र संस्कृतिले विश्वविद्यालय चलाउने क्षमता भन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह बढी देखिएको देउवाले आरोप लगाए । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको सभापति लगायतलाई मुद्दा लगाउने, राखिएका जायज मागहरुको सुनुवाइ नगर्ने, कीर्तिपुरदेखि ठाकुरराम क्याम्पससम्मका विद्यार्थीलाई थुनामा राख्ने तथा विविध माग राखेर २६ दिनदेखि पोखरा विश्वविद्यालयमा अनशनमा बसेका नेविसंघका विद्यार्थीसँग संवाद समेत नगरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।